टुरिजमको ७ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा, कहाँ जाने आबेदन भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » टुरिजमको ७ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा, कहाँ जाने आबेदन भर्न ?
काठमाडौं - टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकको असार ७ गतेदेखि ७ लाख ४ हजार ७३८ कित्ता सेयर लिलामीमा आउने भएको छ । टुरिजमले संस्थापक समूहको ४ लाख ३८ हजार २००.८० कित्ता र सर्वसाधारण समूहको २ लाख ६६ हजार ५३७.२० कित्ता सेयर लिलामीमा बिक्री गर्न लागेको हो । लगानीकर्ताले यो सेयरमा न्यूनतम १०० रुपैयाँलाई आधार मानेर त्यसभन्दा बढी भाउ तोकी निवेदन दिनुपर्नेछ । यसमा आवेदन दिने अन्तिम म्याद असार १५ गतेसम्म तोकिएको छ । यसअघि टुरिजमले चैत १३ देखि वैशाख २६ गतेसम्म ९१ लाख ९७ हजार ७१२ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको थियो । त्यस समयभित्र आवश्यकता अनुसार हकप्रद नबिकेपछि बैंकले बाँकी रहेको सेयर अहिले लिलामीमा ल्याएको हो ।
एनआइबीएल क्यापिटल मार्केट्स लाजिम्पाट काठमाडौं आइपुग्ने गरी आवेदन फारम बुझाउनुपर्नेछ । बोलपत्र असार १६ गते एनआइबीएल क्यापिटल मार्केट्स लाजिम्पाट काठमाडौंमा खोलिनेछ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास सम्ममा बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ११ करोड २० लाख रुपैयाँ छ । बैंकले तेस्रो त्रैमासमा २० करोड ९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २९ रुपैयाँ १३ पैसा (बार्षिक) र प्रतिसेयर नेटवर्थ १७९ रुपैयाँ ७९ पैसा छ । टुरिजम बैंक हाल मेगा बैंकसँग मिसिने प्रक्रियामा छ ।